Antontan'isa: Ny fitomboan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Mety namaky ny ahy vao haingana ianao traikefa ho an'ny mpanjifa miaraka amin'i Waze ao amin'ny Twitter rehefa nitatitra bug aho. Tsy dia nahaliana ahy ilay valiny. Eny, tsy izaho irery no mihamaro hatrany ny mpanjifa manatona media sosialy ary manantena ny hamahana ny olan'ny mpanjifa. Ny sasany tamin'ireo mpanjifako dia tsy faly loatra rehefa nilazako azy ireo ny fihetsiky ny mpanjifa mitsikera amin'ny tambajotra sosialy, saingy sehatra fiadian-kevitra ho an'ny daholobe io ary fotoana iray tsy manam-paharoa hamirapiratan'ny orinasanao.
Ny fanohanana ny mpanjifa kalitao sy ny paikady media sosialy sahaza dia namboarina ho an'ny orinasa. Ity infographic ity dia manolotra ny maha-zava-dehibe sy manome lanja ireo sehatra media sosialy afaka ampiana amin'ny orinasa rehetra.
Raha ny marina, mpampiasa media sosialy 1 amin'ny 4 no nitaraina tamin'ny alàlan'ny media sosialy, ary 63% no manantena fanampiana. Aleon'ny olona ny media sosialy noho ny fikarakaran'ny mpanjifa azy noho ny resaka chat, mailaka na telefaona !. Ity infographic, Ny fiakaran'ny fikarakarana mpanjifa haino aman-jery sosialy, antsipiriany momba ireo fanantenana, fironana ary ny fomba tokony hamalian'ny marika.
Tiako ny mihaino ny anay podcast miaraka amin'ny media sosialy an'i Dell ekipa hianatra ny fomba hanaovana azy tsara. Dell dia manana ekipa iray misy ho an'ny mpiasan'izy ireo rehetra hanome fanohanana mivantana amin'ny alàlan'ny media sosialy. Midika izany fa azonao atao ny mitaraina amin'ny mpiasa rehetra, ary hanaraka ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy ireo. Tsy izany ihany fa ny ekipa voatendry dia manana ny ambaratongam-panohanana rehetra sy ny fizakantena mba hamahana ireo tranga hitazomana ireo mpanjifa hitazona ny hafaliany.
Inona no atahorana hitranga amin'ny olan'ny mpanjifa ratsy eo amin'ny haino aman-jery sosialy?
Ny fotoana tsy dia mahomby dia mety hitombo hatramin'ny 15% ny fihenan'ny mpanjifa
30% ny olona no ho any amin'ny mpifaninana raha tsy mamaly amin'ny alàlan'ny media sosialy ianao
Ny tsy famaliana fitarainana dia mampihena ny fanentanana ho an'ny mpanjifa hatramin'ny 50%
31% ny olona mandefa an-tserasera aorian'ny fananany traikefa amin'ny fikarakarana mpanjifa ratsy
Ny fikarakarana ny mpanjifa tsara indrindra dia miteraka fiakarana avo 81% isan-taona amin'ny fidiram-bolan'ny mpanjifa ary 30.7% ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola!
Inona ny ROI an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa haino aman-jery sosialy?
Orinasa manana traikefa fikarakarana mpanjifa sosialy tsara indrindra amin'ny fitazonana mpanjifa 92%
Zotram-pifandraisana iray mamaly ny sioka dia mitentina 8.98 $ (na 3%) fampitomboana ny vola miditra isaky ny fifanakalozana
Ny telco mamaly ny sioka dia mitentina 8.35 $ (na 10%) amin'ny fampitomboana ny vola miditra isaky ny fifanakalozana
Ny rojo pizza mamaly ny sioka dia mitentina 2.84 $ (na 20%) fampitomboana ny vola miditra isaky ny trnaction
Ity ny infographic feno avy WebsiteBuilders:
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifafiverenana amin'ny fampiasam-bolafidiram-bola isaky ny bitsikaROIhaino aman-jery sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa media sosialyTwitter
Oct 30, 2017 amin'ny 9: 13 AM
Ny fampiasana mahomby amin'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia afaka manampy amin'ny insulate ny fikambanana amin'ny hetsika mikorontana hafa. Raiso ny raharahan'ny Bright House amin'ny alàlan'ny Spectrum. Vitan'izy ireo ny mitazona valinteny avo lenta mandritra ny tetezamita, izay tsy isalasalana fa nankasitrahan'ny mpanjifany.